वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी सोममायाको दर्दनाक कथा - Nayabulanda.com
२९ बैशाख २०७३, बुधबार १३:४७ 765 पटक हेरिएको
काभ्रे : आयस्रोत केही नभएकै कारणले जिल्लाको दुर्गम डाँडापारि गोकुले–७ की १८ वर्षिया सोममाया गोलेले कलिलै उमेरमा वैदेशिक रोजगारको लागि दुबई रोजिन् ।
त्यहाँ पुगेर १० महिना काम गरिन् । काम गर्दै जाँदा मुटु दुखेर वेहोस भइन् । अस्पताल पुगेको ६ घण्टापछि होसमा आउँदा कम्मरदेखि तल चलेन सोममायाको ।
कम्बरमुनिको भाग नचलेपछि कलिलो उमेरमा जिम्मेवारीको भारी बोक्दै आएकीे सोममायामाथि अजङ्गको पहाड थपियो । विदेश गएर कमाउने र परिवार पाल्ने सपना अधुरै रह्यो उनको ।
लोकबहादुर र साइँलीमाया तामाङका पाँच जना सन्तानमध्येमा जेठी सन्तान हुन् सोममाया ।
विद्यालयसमेत टेक्न पाइनन्
अरुले जस्तै उनको पनि पढेर राम्रो मान्छे बन्ने सपना रहेछ । तर, भाइबहिनीहरुलाई पढाउने कर्तव्य पूरा गर्दा उनले विद्यालयको अनुहारै देख्न पाइनन् । पढौँ भने भाइ–बाहिनी र परिवारलाई बिहान–बेलुकाको हातमुख जोर्न धौ–धौ थियो उनको परिवारमा ।
अरु केही नभएपछि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प थिएन सोममायाको । तीन जना भाइ र एक जना बहिनीको भविष्य सोममायाको हातमा जो थियो ।
सोममायाको सपना चक्नाचुर
आर्थिक अवस्था कमजोर । त्यसै त काभ्रेको डाँडापारिलाई कर्णालीको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ ।
विद्यालयसम्म पाइला टेक्न पाइनन् । तर भाइबहिनीहरुलाई चाहिं राम्रोसँग पढाउनैपर्छ भन्ने लागेकोले विदेश जाने योजना बुनिन् । तर, उनको सपना सपनामै सीमित रह्यो ।
सोममायाले रुँदै भनिन्, ‘हामी नपढेका ४ जना गाउँकै साथीबीच सल्लाह भयो अनि हामी विदेश गयौं ।’
सोममायाले विदेश पनि ऋण गरेरै गएकी थिइन् । भाइबहिनीहरुको भविष्य कोर्न विदेश गएकी सोममायाको यतिखेर सबै सपना चकनाचुर भएको छ । उनको जीवनसमेत धरापमा परेको छ ।
विदेश गएको १० महिनामै उनी विरामी भइन् । उनको कम्मरदेखि तल चल्दैन, हात पनि राम्रोसँग चल्दैन । साहुको ऋण त तिरिन् तर ब्याज तिर्न नपाउँदै उनी विरामी भइन् ।
उपचार खर्च धेरै, आशा मार्दै
सुरुमा उपचार हुनेमा उनी ढुक्क थिइन् । उपचारकै क्रममा उनले भाइबहिनीहरुको भविष्य कोर्ने सपना फेरि देखिकी थिइन् ।
‘रोगको उपचार गरेर निको हुन्छु र फेरि विदेश गएर भाइबहिनीहरुलाई पढाउँछु भन्ने लागेको थियो ।’ अब भने आशा मार्दै उनले भनिन्, ‘त्यत्रो खर्च गर्दा पनि उपचार भएन, अब चाहिं भाइबहिनीहरुको लागि केही गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ ।’
निको नहुन्जेल उनी कार्यरत कम्पनीले उपचार खर्च व्यहोर्ने भनिए तापनि सुरुमा पठाएबाहेक कम्पनीले पैसा पठाएको छैन ।
म बाँच्न चाहन्छु मलाई बाचाइदिनुस्
उनले आफू बाँच्न चाहेको बताइन् । उनी निको भएर देश र समाजको सेवा गर्न चाहन्छिन् ।
‘म बाँच्न चाहन्छु, यो रोगबाट मुक्त हुन चाहन्छु ।’ उनले आँसु खसाल्दै भनिन्, ‘विशेक (सन्चो) भएर म देश र समाजको सेवा गर्न चाहन्छु ।’
उनलाई मंगलबहादुर सिङतान नामको दलालले शिखर मेनपावरबाट ८० हजार रकम लिएर पठाएका थिए । यतिखेर उनले सबैसँग उपचारको लागि सहयोगको याचना गरिरहेकी छिन् ।
उनले सहयोगको लागि सम्पर्क नं. ९८१०३०६६५३ तथा ९८१००००१८० मा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेकी छिन् ।
यसरी सुरु हुन्छ सोममायाको दर्दनाक कथा
म २०७१ साल असारमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा दुबइ पुगें । त्यहाँ मैले विद्यालयमा सरसफाइको काम गर्नुपर्थ्यो । तलब सुविधा जे जस्तो भए पनि काम मेरो लागि सजिलै थियो । काम गरेको करिब १० महिना भएको थियो । विहिबारको दिन थियो, करिब राती ३ बजे अचानक ब्युँझेछु । ब्युझँदा मेरो मुटु दुखिरहेको थियो ।
म रोएँ, कराएँ तर मेरो केही लाग्दैनथ्यो किनकी त्यहाँ मलाई साथीहरुले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । विहान ५ बजेसम्म म सहेरै बसें । मुटु दुखेकै अवस्थामा म काममा गएँ । तर मैले काम गनै सकिनँ, सुतिरहें ।
विद्यालयमा क्लिनिकको व्यवस्था थियो । एकजना नर्सको पनि व्यवस्था थियो । नर्सले मलाई चेकजाँच गरिन् । उनले रोग पत्ता लगाउनै सकिनन्, केही नभएको उत्तर दिइन् । मलाई भने झन्पछि झन् दुखिरहेको थियो । पछि अस्पताल लिएर गए तर विडम्बना, कम्पनीले मेरो मेडिकल कार्ड नबनाएकोले मैले त्यहाँ उपचार पाइनँ ।
मलाई कम्पनीकै अस्पतालमा लगियो । चेकजाँच भयो तर के भएको हो मलाई केही पनि भनेनन् डाक्टरले । मात्र केही औषधी दिएर पठाए । कोठामा गएर दुवै खाएर सुत्न सल्लाह दिए डाक्टरले ।
कम्पनीकै गाडीले मलाई होस्टेलमा पुर्‍याए । होस्टेलमा पुगेपछि म गाडीबाट ओर्लिन खोज्दा एक्कासी मेरो खुट्टा चलेन । टेक्न खोज्छु त खुट्टाले टेकेन । म साह्रै दुखित भएँ । म बेस्सरी रोएँ ।
म बल्लबल्ल कोठासम्म गएँ । साथीहरु कोही पनि थिएनन् । कामबाट फर्केकै थिएनन् । कोठामा न खानेकुरा, न पानी, औषधीसमेत नखाइ म सुतें । निरन्तर मुटु दुखि नै रहेको थियो । मुटु दुखेको समयदेखि नै पिसाब पनि बन्द भयो । म पीडाले छटपटाइरहेकी थिएँ । विरानो मुलुकमा आफ्नो भन्नु को नै हुँदो रहेछ र ?
एकछिनपछि मलाई एक्कासी पिसाब लाग्यो । म ट्वाइलेट जानका लागि उठ्न मात्र के खोजेकी थिएँ, मेरो कम्मरदेखि तल चल्दै चलेन । म फेरि बेस्सरी रोएँ ।
मैले आफ्नो देशलाई सम्झें, आमाबुबालाई सम्झें, आफन्त, परिवार सबैलाई सम्झें । विरानो देशमा मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि भएनन् ।
धेरै समयपछि पिसाब लागेको थियो तर ट्वाइलेट जान नसक्दा मैले खपेर बस्नुको विकल्प भएन । पेट फुल्दै आयो मेरो । दिउँसो पाँच बजेतिर साथीहरु कामबाट फर्के, अनि बल्ल मैले पिसाव फेर्ने मौका पाएँ ।
साथीहरुले कम्पनीलाई जानकारी दिए । तर कम्पनीको गाडी करिब बेलुका ७ बजे मात्र आयो । अर्कै अस्पताल लगे । फेरि त्यो अस्पतालले पनि अर्कै अस्पतालमा रिफर गर्‍यो ।
शुक्रबार फेरि अस्पताल पुर्‍याएपछि एमआरआई गरे । एमआरआई मेसिनबाट जब बाहिर निकाल्यो, फरि मेरो दुवै हात चलेन । मलाई त्यतिखेर झन् पीडा भयो ।
कम्मरदेखि तल नचल्नु, अझ दुवै हात पनि नचल्ने भएपछि मैले होश गुमाउँदै गएँ ।
शनिबारको दिन साथीहरु मलाई भेट्न अस्पताल आए । उनीहरु मलाई नेपालको खबर सुनाउँदै थिए । नेपालमा भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएको खबर सुनाए साथीहरुले । उनीहरुले मेरो बुबालाई फोन लगाइदिए ।
बुबासँग बोल्दै थिएँ, मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, मेरो स्वर पनि हरायो, त्यसपछि मलाई केही थाहा भएन, ५ दिनसम्म मेरो होश आएनछ । होश आउँदा म आईसीयूमा थिएँ ।
नाकको प्वालबाट पाइप घुसारेर मलाई खान खुवाइएको रहेछ । सास फेर्न पनि मलाई गह्रो भएको रहेछ । बेडमा सुत्दा भीरमा सुतेको जस्तो महासुस हुँदोरहेछ, खोलाको छेउमा सुतेको जस्तो भान हुँदोरहेछ ।
नाकबाट रगत आउन थालेपछि मुखबाटै पाइप हालेर खाना खुवाइएको रहेछ । सास फेर्न गाह्रो भएपछि घाँटीमा प्वाल पारी पाइप राखिएको रहेछ । मलाई अलि ठीक भएपछि साधारण बेडमा लगे । तर रोगले फेरि च्यापेपछि आइसीयूमै लगेर राखे । ५ दिनपछि साधारण वार्डमै लगेर राखे ।
मेरो पूरै होस् आइसकेको थियो । दिनानुदिनको शारीरिक अभ्यासले मेरो हात अलिअलि चल्न थाल्यो । आफै खाना खान सक्ने भइसकेकी थिएँ । तर कम्मरदेखि तल भने चलेन । अनि मैले ह्विलचेयरको सहयोग लिनुपर्‍यो ।
विरामी भएको करिब ३ महिनापछि मलाई त्यतिकै नेपाल पठाउने कुरा भयो । तर नुवाकोटको एक जना दिदी मिनिशा लामाले नेपाल र विदेशमा रहेका सबैलाई खबर गरेपछि मलाई पठाउने मेनपावर र कम्पनीलाई दबाब सिर्जना गरेछन् । नेपाल पठाएर पनि उपचार खर्च ब्यहोर्ने शर्तमा कम्पनीले नेपाल पठाए ।
एयरपोर्टबाटै मलाई सिधै काठमाडौंको ग्रेन्डी अस्पताल लगे । मेरो उपचारको लागि भनेर कम्पनीले नेपाली रुपैयाँ १० लाख ३६ हजार मसँगै पठाए । अनि बीचमा फाउन्डेसन नामक संस्थाले मलाई ६ लाख रकम सहयोग गर्‍यो । ६ महिना अस्पतालमा उपचार गर्दा सबै पैसा सकियो । ६ महिनाको बीचमा १६ लाख खर्च गर्दासमेत मेरो उपचार हुन सकेन ।
एकातिर उपचार हुनै नसक्नु, अर्कोतिर भएको पैसा पनि सकेपछि मैले बनेपामा आएर बस्ने योजना बनाएँ । त्यहीअनुसार म बनेपामा बस्न थालें । बस्दाबस्दा पछाडि घाउ भएपछि म बस्नसमेत नसक्ने भएँ । त्यसमाथि अचेल मेरो हात राम्रोसँग चल्दैन ।
ग्रेन्डी अस्पतालका मुख्य डाक्टर डा. राजकुमार पौडेलसँग मेरो भेनाजु राजेन्द्र घलानले कुरा गर्दा उपचार हुन लामो समय लाग्ने बताए । निरन्तर उपचारमै लाग्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाह रहेछ ।
म सबैसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म बाँच्न चाहन्छु, मलाई उपचारको लागि तपाईंले सकेको सहयोग गर्नुहोस् । मेरो भविष्य तपाईंहरुकै हातमा छ । म एक आर्थिक विपन्न, काभ्रेको विकट ठाउँको तपाईंकै चेली हुँ । मलाई बाँच्ने अवसर दिनुहोस् । इसमताबाट